Ciidamo kusugnaa duleedka Badhan oo wada dhaqdhaqaaq ay kaga careysan yihiin Dagaalkii Garoowe.
November 7, 2019 NEWS 1
BADHAN(P-TIMES) – Sidda ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magaalada Badhan maamulka gobalka Sanaag ee Puntland ayaa ku howlan sidii ay dajin lahaayeen xiisad cabsi laga qabo in ay ku dhaqaaqaan talaabo aan sax aheyn ciidamo kusugan gobalkaas oo katirsan kuwa Puntland, kana carooday talaabadii ay xalay ciidamo ku weerareen xarunta baarlamaanka ee Garoowe.
Ciidamadan ayaa la sheegay in ay soo gaareen deegaanka Ceel-Daahir oo ay marto wadada laamiga ah ee isku xirta gobalada Puntland, dadka qaarkood ayaana walaac kamuujinaya in ay rabshad halkaasi ka abuuraan.
Qaar kamid ah dadka deegaanka Ceel-Daahir ayaa u sheegay PUNTLANDTIMES in ay dadaal ugu jiraan sidii loo xakameyn lahaa ciidamadan oo ka careysan talaabadii Garoowe, waxayna sheegeen in ay joojin doonaan isku socodka gaadiidka.
Ciidamadan ayaa ku hubeysan gaadiidka dagaalka, waxaana subaxnimadii hore ee saaka ay soo gaareen laamiga dheer ee isku xira Puntland, iyadoo ay socdaan dadaalo lagu joojinayo ficilo ay sameeyaan.
Wariyaha PuntlandTimes ee magaalada Badhan ayaa sheegaya in ay dad badan walaac ka muujiyeen weerarkii xalay lagu qaaday baarlamaanka xaruntiisa, waxaana gobalkan ka soo jeeda Gudoomiye Mr, Dhooba-Daareed oo ay mudanayaal baarlamaan mooshin ka gudbiyeen.
Ruqia Aw-Maxamed Farah says:
Marka ugu horreysa, sida dad badan oo reer Puntland ahi ay dareemayaanba, dhacdadii xalay waa wax aad looga xumaado, waana nasiibdarro in si macno darro ah dad halkaas ugu dhintaan. Waxay muujinaysaa in qaan-gaarnimada siyaasadeed ee Puntland oo la sheegtaa aysan mid dhab ah ahayn ee ay hadba ku xirantahay garaadka iyo danta gaar ah ee madaxda Puntland ugu sarreeya. Marka horaba sida xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynuhu ku yimaaddaanba si xalaal ah maha. Marka xaalku waa ‘Hal xaaraan ahi, Nirig xalaal ah ma dhasho’. Eedaymaha guddoomiyaha ee xagga inuu dawladda fedderaalka wax la wato, ( (oo aadna tiri dambi ma ah), arrintaasi waa wax khaldan waayo guddoomiyaha baarlamaanka waa laga filayaa inuu danaha Dadka Reer Puntland ee dhinac kasta madaxweynaha iyo golaha dawladda kala shaqeeyo, kana mid noqdo siyaasadaa dawladda Puntland kaga aaddan Dawladda Federaalka. Ma ahan in guddoomiyaha iyo xubnaha baarlamaanka qaarkood loo adeegsado burburinta iyo khalkhal gelinta degaannada Puntland oo la rabo in qabiil iyo qurunka siyaasadeed ee Soomaliya hareeyay hadda lagu dhabarjabiyo Puntland. Waxaan ugu baaqayaa in shacab reer Puntland meel kasta oo ay joogaan ciddiyaha iyo ilkaha ku diriraan si ay u dhowraan ammaanka degaannadooda, iskagana qabtaan wixii khalkhal gelinaya jiritaankooda, nabadda iyo horumarka ay maanta haystaan. AAYAHA IYO JIRITAANKA PUNTLAND WAA KA WEYNYAHAY NIMAN IS -XINIIYO TAABANAHA OO AAN LAHAYN CAQLI IYO XEELAD AY KU MAAREEYAAN KHILAAFYADA DHEXYAALLA SI AY UGA SHAQEEYAAN DANAHA SHACABKA AY KU ANDACOODAAN INAY KURAASTA UGU FADHIYAAN!!